Positive ဖြစ်လို့ ဝမ်းသာတဲ့ လူနာ (သို့) Covid-19 ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ​ဆေးရုံကြီးသို့ရောက်ရှိသွားပုံနှင့်​ ကိုယ်တွေ့ကြုံရမှုများ(အစ အဆုံး ဖတ်ကြည့်စေချင်) – Maythadin
Positive ဖြစ်လို့ ဝမ်းသာတဲ့ လူနာ (သို့) Covid-19 ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ​ဆေးရုံကြီးသို့ရောက်ရှိသွားပုံနှင့်​ ကိုယ်တွေ့ကြုံရမှုများ(အစ အဆုံး ဖတ်ကြည့်စေချင်)
May Thadin | October 5, 2020 | Knowledge, News | No Comments
Covid-19 ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ရောက်ရှိသွားပုံနင့် ကိုယ်တွေ့ ကြုံ ရမှုများ(အစ အဆုံး ဖတ်ကြည့် စေချင်)
ကျနော်ဟာ ၂၁.၉.၂၀၂၀ နေ့လည် (၃:၀၀)နာရီခန့်မှာ ရေချိူးရင်း သွားတိုက်သည့်အခါသွားတိုက်ဆေးရနံမရတော့လို့ ချက်ခြင်း ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာကာ ခြမ်း၍ ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ကြိတ်ဝါးကြည့်ပြီး အနံ့ အာရုံ ခံသော်လည်း ဘာအနံမှ မရသလို ဖြစ်လာသော်ကြောင့်
ကျနော့်တူတော်မောင်ကို အဝတ်အစားတောင်းယူကာလှဲလည် ဝတ်စဉ်ပြီး ထမင်းစားပွဲရှေ့ထိုင်ကာ ပုဇွန်ဟင်းနင့် ထမင်း သုံးလေးလုပ်စား​ကြည့်ပါသော်လည်း ဟင်းအနံ မရ၊ ကြက်သွန်ဖြှူစ်ဥကို ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး ကြိတ်ဝါးပြန်သော်လည်း
အရသာပါ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် သိရှိရလိုက်ချိန်မှာ ငရုတ်သီးစိမ်း(ယမန်နေ့က စားခဲ့သော၊အလွန်စပ်လှသော) နှစ်တောင့်ကို တစ်ပြိုင်နက် ကြိတ်ဝါး၍လျှာအနှံ့စပ်သည့်အရသာအနံမရသည့်အပြင်လှည့်တင်ထိတွေ့ခံစားကြည့်ပြန်တော့လည်း
ဘာမှ မသိရှိရသည့်အတွက် တူဖြစ်သူအား အကျိူးအကြောင်း ရှင်းပြ၍အဝတ်အစားများထည့်စေ၍ ရပ်ကွက် အုပ်ချူပ်ရေးမှုးလည်းဖြစ်၊ငယ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သူဦးဇော်ဝင်းထွန်း(ခ)ကိုပေါက်စီထံ အားကိုးတစ်ကြီးများစွာနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်သောအခါ
ပြန်ကြားလိုက်တဲ့ စကားသံကတော​” ​အေး..သူငယ်ချင်းကိုလင်းရေ..ငါရယ်၊အသေးလေးရယ် ဆေးရုံကြီးကို သွားပို့တဲ့အမေကြီးက ငါတို့ပို့ပြီး နာရီဝတ်တောင် မကြာဘူး ဆုံးသွားတယ်လေ၊မင်းသိတယ် မဟုက်လား?အေး
အခု အဲဒီ့ အမေကြီးကို ငါတို့တွေ ထိထိရောက်ရောက် အိမ်ပေါ်ကနေအောက်ချပြီးဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ကို ပို့ခဲ့လို့လေ၊အခု အဖြေထွက်လာပြီ (positive)တဲ့ အခု ငါနဲ့ အသေးလေးလင်ဝှေ့ရူံမှာ Q ဝင်ရတော့မယ်ကွာ”ဆိုတဲ့စကားသံ ကို နားဝမှာ ကြားမိ သိရှိလိုက်ချိန်မှာ
ရင်ထဲမှာစို့နင့်သွားမိတယ်၊အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်းငါကတော့ အနံနဲ့အရသာ ပျောက်ဆုံးသွားပြီဆေးရုံကြီးသွားချင်တယ် ကူညီပါဆိုပြီး တောင်းဆိုမိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ၊အုပ်ကြီးက မြို့နယ်ကျန်းမာရေးကို ဖုန်းဆက်ချိတ်ဆက်ပေး၊မှာစရာရှိတာတွေ မှာကြားပြီး ဖုန်းချလိုက်မိတယ်။
စိတ်တွင်းထဲမှာတော့ အုပ်ကြီးရယ်ညီငယ်လေးစိုးသူရယ်(အသေးလေး)၊ကျနော်ရယ် သုံးယောက်လုံးတစ်ရက်ထဲ တစ်ချိန်ထဲမှာ ဖြစ်ရကြုံရလေခြင်းဆိုပြီး ရင်ထဲမှာဝမ်းနည်းအားငယ်မိနေမိပြီး ငါတို့ဖို့မြေပရဟိတကျမှ သုံးယောက်ပြိုင် ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီး
စိတ်တွေရှုတ်ထွေးနေမိပြီး အုပ်ကြီးရှီဖုန်းထပ်မံဆက်မိတော့ အုပ်​​ကြီးက”ကျန်းမာရေးဌာနကိုဖုန်းဆက်ထားပြီးပြီ မင်းရှီဆက်လေ့မယ်”ဆိုတဲ့စကားကြားရပြီးငါးမိနစ်လောက်မကြာခင်မှာဘဲကျန်းမာရေးမှဆရာမက အကျိူးအကြောင်းမေးမြန်းတာကို ပြန်ဖြေပြီးတာနဲ့
ချက်ခြင်းသတိရသွားမိတဲ့ ကိုနအီး(ဦးဝင်းမြင့်)ရှီကိုဖူန်းဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရယ်တဲ့ကုန်စင် ရှင်းပြပြီး ဆေးရုံကိုသာမြန်မြန်သွားရောက်လိုကြောင်း တောင်းဆိုမိလိုက်တယ်။တစ်အောင့်လောက်အကြာမှာ ကိုနအီး(ဦးဝင်းမြင့်ထံမှ ဖုန်းဝင်လာပြီး နာရီဝတ်အတော်အတွင်း လာခေါ်မည်
အစဉ်သင့်လုပ်ထားပါလို့ပြောတော့ ကျနော်ကလည်း အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ ပြန်ပြောလိုက်တယ်၊အဲလိုနဲ့ ၁၅မိနစ်လောက်အကြာမှာ ကားရောက်လာပြီ ပြောတာနဲ့မိုးဖွဲဖွဲမှာ အိတ်လွယ်ပြီး လင်းနို့ကားပေါ် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ကာစံပြဆေးရုံသို့ ဦးတည်ရာသို့ လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။
သဃ်ာကျွန်း စံပြဆေးရုံရောက်တော့ ကားပေါ်မှာနာရီဝတ်ကျော်ထိုင်နေရပြီး လူနာတွေ များလွန်းလို့ လက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ကိုနအီး(ဦးဝင်းမြင့်)ကY.R.Oနဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပြန်လည်ဦးတည်လာရာ အရေးပေါ် ဌာနရောက်၍
မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားချိန်မှာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးရဲ့လွဲစာလက်မှတ်ပါရဲ့လားလို့မေးမြန်းချိန်မှာ ကျနော်တို့မှာ မပါပါဘူးလို့ ကျနော်ပြန်ဖြေဆိုချိန်မှာကိုနအီးက ဆရာတို့ခင်ဗျာ ကျနော်တို့က Volunteer လုပ်နေတဲ့သူတွေပါ ကိုလင်းMask ချွတ်ပြီး
မျက်နာပြလိုက်လေဆိုပြီးပြောတော့ကျနော်လည်း Maskကို မြန်မြန်မေးအောက်ကို ချွတ်ပြလိုက်တော့ ဟာ အစ်ကိုကြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်းဆိုပြီး ဂရုဏာနဲ့မေးမြန်းပြီး ဆေးရုံထဲကို ချက်ခြင်း ဖုန်းဆက်သွယ်ပေးပြီး ဝင်/ထွက်အပေါက်ဝရဲ့စတီးလေးခုံတွဲမှာ ထိုင်ခိုင်းထားတယ်။
၁၀မိနစ်လောက်နေတော့ Covid သံသယအဆောင်ထဲက ဆရာဝန်က ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့အကြာင်းနဲ့ ရှေ့တစ်ပတ်ကျော်က ကိစ္စတွေ ဆက်နွယ်ပတ်သပ်မှုအချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့မှ စကားတစ်ခွန်းပြောဆိုပါတယ်၊
စကားကတော့ ဝင် ပြီးရင် ပြန် ထွက်လို့မရဘူး*ဆိုတဲ့ စကားလေးပါ ၊သူများတွေကတော့ ဘယ်လို ခံစားမလဲ မသိပြင်မဲ့ကျနော်ကတော့သဘောတွေကျပြီး ကျေနပ်နေမိတယ်လေ၊ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စစ်ဆေးမှု(P or N)ကို သိရှိရမယ်၊
(P)ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ကုသမှုမြန်မြန်ခံယူရမယ်ဆိုပြီး အတွေးများစွာနဲ့ဖြစ်လိုက် ဘုရားစာတွေစိတ်ထဲကနေ ရွတ်ဖတ်လိုက် သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိုနအီးနဲ့ကိုဟာရှင်တို့နှစ်ယောက်ကို မျက်နာငယ်လေးနဲ့အားငယ်စွာနဲ့ အားကိုးတကြီး ကြည့်လိုက်နဲ့ဗျာများစွာနဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာ
စိတ်တွင်းကဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေတာကို ပြန်လည် သုံးသပ်မိလိုက်ပြီး အော်”ငါတို့တွေ အရေးပေါ် လူနာတွေ ၊နာမကျန်းလူနာနဲ့ သံသယလူနာတွေကို ဒီလောက်ပို့ဆောင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိရက်သားနဲ့ ငါအခုကိုယ်တိုင်ဖြစ်လည်းဖြစ်ရော အနြေ္ဒမဲ့လိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာ
ဘာကြောင့်လည်းလို့ သုံးသပ်မိပြန်တယ်၊အဲဒီ့မှာတင် အဖြေထွက်လာကတော့ ပုထုစဉ်သဘာဝအရ အတ္တဘောကြီးဆိုတာ သုံးသပ်မိလိုက်တယ်”၊အတွေးထဲမြောနေချိန်မှာဘဲ P.P.E ဝတ်စုံတစ်ယောက်ကဦးထင်အောင်လင်း ဝင်မယ်ဆိုပြီး
တံခါးဟကာ အော်ပြောတော့ ကျနော်လည်း အိတ်ကိုဆွဲပြီးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို နူတ်ဆက်ကာရင်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းစို့နင့်စွာဖြင့် အပေါက်ဝမှ တံခါးမှုးကသံကြိုးဖြင့်ချီရစ်ထားသော သံကြိုးကို​ဖြေကာ တစ်ကိုယ်စာ…မှန်စလိုက်ထိုးတံခါးကို ဟ ပေးသောကြောင့်
ခေါင်းငုံပြီးအဆောင် ကော်ရီတာလှမ်းဝင်လိုက်ချိန်မှာ မြင်တွေ့လိုက်ရာကတော့အများကြီး အများကြီးမှ အများကြီး လူတွေ လူတွေအရွယ်ပေါင်းစုံတွေ အရမ်းအံအော်မိသွားတယ် PPE နဲ့ လာခေါ်တဲ့သူက ဆရာဝန်တွေ ရှိတဲ့နေရာကိုဒီတည့်တည့်သွားလိုက်ပြီး
ညာဘက်ကို ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့မယ်လို့ လမ်းညွန်ပြောဆိုတော့ကျနော်ကလည်း ဟုက်ကဲ့ခင်ဗျာ့ဆိုပြီး ပြန်လည်ပြောဆိုပြီး ဝဲဘက်ယာဘက်တွေကို အံအော်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ စူးစမ်းကြည့်ကာလျောက်ရင်း ဆရာဝန်လားသူနာပြုလား ခွဲခြားလို့ မရတဲ့ PPEဝတ်ထားတဲ့
အလယ်ကောင်တာ မဟုက်တဲ့ယာဘက်ကြောကပ်ထားတဲ့ ကောင်တာကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်(သူများတွေထက် ကျနော်တစ်ဗန်းသာနေတာကတော့အရေးပေါ်လူနာတွေကို ယခင်ကာလတွေတုန်းက ပို့ဘူးထားတော့အစိမ်းသက်သက်ကြီးတော့ မဟုက်ဘူးလေ)
​ကောင်တာရှေ့ရောက်တော့​Dr? Nurse? မသိရတဲ့ မေးသမျှကို ဖြေကြားလိုက်တယ်၊ယခင်ရောဂါ ဘာအခံရှိလည်းလို့လည်း တိတိကျကျမေမြန်းတာကိုတော့သတိထားမိသလို လေးစားမိသွားတယ်၊မေးမြန်းမှုပြီးသွားချိန်မှာ ကျနော် ဘယ်မှာနေရမလဲ?လို့မေးချိန်မှာ
လွတ်တဲ့နေရာလွတ်တဲ့ကော်ထိုင်ခုံမှာထိုင်လို့ရတယ် ဦးလေး*ဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တာကြားလိုက်ရတော့ သဘောပေါက်စပြုမိသွားပြီ၊ကျနော်နောက်ထပ်မေးခွန်းထပ်မေးမိတယ်”ဆရာမရေ ကျနော့်ကို Swab ဘယ်တော့်လောက် ယူမှာလဲ?လို့ မေးမိပြန်တော့
မနက်ဖြန်မှဆိုတော့ ကျေးဇူးပါလို့​ပြန်ပြောမိရင်း အိတ်မြန်မြန်ဆွဲကာ ကနဦးဝင်/ထွက်ပေါက် အနီးကို သုတ်​ခြေတင်လာပြီးလစ်ဟာနေတဲ့ သံမံတလင်းကွက်ပေါ် ဖိနပ်ခုထိုင်ရင်းနဲ့ အပြင်ကကိုနအီး နဲ့ ကိုဟာရှင်ကို အကျိူးအကြောင်းပြောပြလိုက်တာနဲ့တခဏအတွင်းမှာဘဲ
မြက်ဖျာ၊ခေါင်းအုံး၊စောင်နဲ့ စားဖို့သောက်ဖို့ပါချက်ခြင်းပို့ပေးတယ်နာရီကို ကြည့်မိလိုက်တော့ ၈:၀၀နာရီထိုးတော့မယ်၊အဲဒါနဲ့ အုပ်ကြီးရှိ ဖုန်းလှမ်းဆက်၊အိမ်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှီ အကျိူးအကြောင်းရှင်းပြတုန်း ကျနော့်နာမည် လှမ်းခေါ်တော့
ပက်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို အထုပ်လေးကြည့်ပေးပါပြောပြိး သုပ်ခြေမြန်မြန်တင်ရတာပေါ့၊ သွားရာလမ်းမှာလည်းရင်စို့စရာမြင်ကွင်းတွေဘဲကြံကြိုက်နေရာတာပေါ့လေ၊ဟိုရောက်တော့သွေးချို/ဆီးချိူဆေးနဲ့သွေးတိုးဆေးတွေပါလားဆိုတော့
ကျနော်ကခေါင်းညိတ်ရင်းပါတယ်ပြောပြပေါ့၊ဒါဆိုရင် Vitacee အပြင်မှာဝယ်ပြီး တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ပါ၊ကျမတို့အော်ခေါ်သံကိုလည်းဂရုစိုက်ပေးပါဆိုပြီး ပြောတော့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာနဲနဲအချဉ်ဖောက်မိသွားတယ်၊သို့သော်လည်း ဟုက်ကဲ့ပါဆရာမ၊
​ကျေးဇူးပါ ဆရာမလို့ပြောပြီး မိမိနေရာ မိမိပြန်ရောက်ချိန်မှာ ကျနော့်ရှေ့က ၂ရက် ကြိုရောက်နင့်ပြီးနေတဲ့သူတွေက Vitacee ဝယ်ခိုင်းတာလားဆိုပြီး တန်းပြောလိုက်တော့ အံသြမိသွားတယ် ၊ဒါနဲ့ အပြင်က ကိုနအီးကို ဖုန်းဆက်မှာတော့ ချက်ခြင်းလာပို့တယ်
လက်ဖက်ရည်လည်း ပါလာတော့ အားရဝမ်းသာဖြစ်မိပြီးပူပူလေး မှုတ်သောက်ချိန်မှာ ဘာအရသာ၊ဘာအနံမှမရတာပြန်ခံစားမိချိန်မှာ မျက်ရည်ဝဲမိသွားတာကိုကျနော့ရှေ့တည့်တည့်ကုတင်ပေါ်ကညီငယ်က ချက်ခြင်းအောက်ဆင်းလာပြီး
အစ်ကိုရေ ဘာမှအားမငယ်နဲ့ အခုကျနော့တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးက အနံရော၊အရသာရော၊ဝမ်းပါသွားပြီးကိုယ်တွေပူလို့ ရှေ့နှစ်ရက်ထဲက ရောက်နေကြတာမနက်ဖြန်ညမှ Swab Result ထွက်မှာဒီက အခုရဌိတဲ့လူတွေအားလုံးက
မနက်ဖြန်ညကိုအဖြေမြန်မြန်ထွက်စေချင်ပြီး ပို့တဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးသွားချင်နေကြတဲ့သူတွေလို့ ပြောပြလိုက်တော့မဂ်လာမွန်ဈေးနဲ့ရွှေပြည့်စုံဈေးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ၅ယောက်ကလည်း အားပေးစကားတွေပြောရှာကြတယ်၊စကားရှိန်တွေတင်လာပြီး
အားငယ်စိတ်တွေ လျော့နည်းလာချိန်မှာရွှေပြည့်စုံဈေးက ဆရာကြီးက ဒဲ့တိုးကြီး ပြောချလိုက်တဲ့စကားလုံးက ဒီမယ်ဆရာရေ ကျနော်တို့အားလုံးနီးပါးပိုးရှိဆိုတဲ့ Positive result ဘဲထွက်မှာ မြေကြီးလက်ခပ်မလွဲစေရပါဘူးပြောသံကိုစောစောက ကုတင်ကဆင်းပြီး
နောက်ထပ်အားပေးတဲ့ညီငယ်လင်မယားရော ၁၀ယောက်ကျော်ကပါ သိပ်မှန်တာပေါ့ ၊အာမခံတယ်၊ ဒါအမှန်ဘဲဆိုပြီး ဝင်ပြောကြ ကုန်ပါလေရော ဘုမသိ၊ဘမသိဖြစ်နေပြီးရေးရေးလေး သဘောပေါက်စတော့ညပုလာရပြီလေ၊​နောက်ဆုံးကျမှ
ယ္ခင်ကြိုရောက်ပြီးတဲ့သူတွေရဲ့ ပြောပြချက်ကြောင့်သူတို့လည်းအပ်တက်သေချာစွာ ပြောနိုင်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျနော်နာရီဝတ်လောက်မှ သဘောပေါက်နာူလည်သွားရတော့တယ်။စကားတွေ ပြောရင်းနဲ့ဘဲ ၁၂:၀၀နာရီကျော်လာတော့ အလျှိူလျှိူ ထောင့်လေးတွေကပ်ပြီး
လှဲကြအိပ်ကြတော့ ကျနော်လည်း မြတ်ဖျာလေးခင်းပြီး ထိုင်ပြီးငေးမော်လိုက်ပေါ့ ၁၅မိနစ်တစ်ခါလောက်ကို လူနာတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ဝင်ဝင်လာရင် ကျနော်လမ်းဖယ်ဖယ်ပေးလိုက်ပေါ့လေ၊ညည့်နက် တစ်နာရီခွဲလောက်မှာ ကျနော့်ကို ထပ်မံအော်ခေါ်ရပြန်ရော
ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော်ဘယ်ရမလဲ ဦးစွာ ဆရာမရေ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ကျနော်က ဟိုအဝင်ထိပ်မှာ နေ နေလို့ပါဆိုပြီး တောင်းပန်လိုက်တယ်၊လက်ဖြန်ကနေ သွေးဖောက်ယူတာ အကြောကရှာလို့မရ၊အပ်ကလည်းအကြီးကြီး၊အကြောမိပြန်တော့လည်း
သွေးက နည်းနည်းလေးဘဲစုပ်ယူလို့ရတယ်၊ရတဲ့သွေး ပြွန်လေးထဲ ထည့်ပြန်တော့လည်း သွေးက ပြစ်ခဲနေပြန်တော့ ထည့်မရတဲ့နောက်ဆုံး အပ်ဖောက်ရာလည်း များတာနဲ့ဆရာမက အားနာတဲ့လေသံနဲ့ ဦးရယ် မနက်မှဘဲဖောက်ယူတော့မယ်
အပ်အရာတွေလည်း များသွားပြီဆိုပြီး ဂရုဏာသံနဲ့ ပြောရှာတယ်၊ကျနော်က နာရီဝတ်ဘဲ စောင့်ပါ ပြန်လာခဲ့မယ်ပြောပြီး၊မိမိနေရာလည်းရောက်ရော လက်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စိတ်ကို တည်ငြိမ်စွာထားပြီး ညာလက်ဖျံကို သွေးပူအောင် ပွတ်နေလိုက်တယ်
၁၅မိနစ်လောက်ကြာပြီးချိန်မှာ ကျနော်ပြန်သွားပြီး”ဆရာမရေ ဖောက်ကြည့်တော့ ရပြီဆိုပြီး ဖောက်ခိုင်းလိုက်တော့​တစ်ချင်ထဲနဲ့ အစဉ်ပြေသွားတယ် ထွက်လာတဲ့သွေးကလည်းစုပ်တာနဲ့ ​အစဉ်ပြေစွာ ထွက်လာတော့ဆရာမလည်း အံအော်ပြီး ဘာလုပ်လိုက်လည်းလို့မေးတော့
​လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တယ် အရင်တုန်းက သွေးလှူနေကြလေသွေးတိုး/ သွေးချိူဝင်သွားလို့​ ယ္ခုနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ မလှူဖြစ်တော့တာဆိုပြီး ကြွားလုံးသုံးလိုက်မိတယ်”တစ်ခါ ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်ရောက်ပြီးထိုင်ခါစဘဲ ရှိသေးတယ် ထပ်ခေါ်ပြန်ရော
E.C.G ဆွဲပေးပြန်ရော ချက်ခြင်းကျနော်မေးမိတယ် အဖြေက ကောင်းတယ်တဲ့ ကျနော်ပျော်ပြီးကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ်ပြန်ထိုင်လိုက်ပြီး ရေတစ်ဝကြီးသောက်ဖြစ်လိုက်တယ် ၁၅မိနစ် နာရီဝက်လောက်ဆိုရင် တစ်ခါလာပြန်ပြီ
အစုလိုက်ရောတစ်ဦးချင်းရော ကျနော်လည်း နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ ထိုင်လို့မရတော့တဲ့ အဆုံး စူးစမ်းလေ့လာရေးကို စတင်လိုက်ပါတော့တယ် လူနာအများစုနဲ့ဝေသနာရှင်အများစုဟာ မသဲကွဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်၊တစ်ချို့က အစာအိမ်ဖြစ်လို့၊
ရင်ဘက်အောင့်လို့၊သွေးတိုးလို့၊နံရိုးနာလို့(ကျနော့မိတ်ဆွေ-လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်)ခေါင်းကြီးထိုးနေလို့၊သွေးချိူတက်နေလို့စတဲ့ လူနာတွေနဲ့ ကျနော်တို့လို Covidတွေနဲ့ ရောနှောနေကြပါတယ်၊ ဒီလို အလုံပိတ်အဆောင်ကို ရောက်ရှိတာနဲ့ ပြန်လည်ထွက်လို့မရသလို
Auto သံသယ လူနာ ဖြစ်သွားရပါတယ်။ကျနော်လည်း ညောင်းညောင်းရှိတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘူမိဗိမ္မာန်လေးမှာခြေဆင်းထိုင်နေရင်း သုံးနာရီကျော်လောက်မှာ အသက်၈၅ ကျော် အမေကြီးတစ်ယောက် ရောက်ရှိလာပါတယ်၊အစ်မတစ်ယောက်ကထပြီးနေရာပေးလို့ ထိုင်တော့
ဝိုင်းမေးကြပေါ့လေ သွေးတိုးပြီးရင်ဘက်ကြီးတောင့်လို့တဲ့ အကုန်လုံး ဂရုဏာ ၊မေတ္တာတွေနဲ့ဆက်ဆံကြပေါ့၊အဲလိုနဲ့(၂၁.၉.၂၀၂၀)ကနေ (၂၂.၉.၂၀၂၀)ရဲ့နံနင်ခင်းကို ရောက်ရှိသွားပါလေရော၂၂.၉.၂၀၂၀ နံနက် (၆:၀၀)နာရီ မထိုးခင် ကျနော့် နာမည်အော်ခေါ်တော့
အပြေးအလွှားသွားပြီးရောက်တော့ ဓာက်မှန် ရိုက်ရမယ်ဆိုလို့ဓာက်မှန်ခန်းထဲဝင်ရိုက်ပေါ့လေ ၊အထွက်မှာ အလှငွေလေးဆိုတော့ ထည့်လိုက်ရသေးတယ်၊အပြန်မှာ အပေါ့သွားချင်လို့ သည်းခံပြီးနာရီဝတ်ကျော်စောင့်လည်းစောင့် အောင့်လည်းအောင့်ထားပြီးမှ
ကိစ္စရှင်းတော့တယ်၊ဒါနဲ့ မိမိနေရာမိမိပြန်ထိုင်ရင်း ထွေရာလေးပါးစဉ်းစားလိုက်၊ုတရားစာတွေရွတ်ဖတ်လိုက် ဝင်လာတဲ့သူတွေငေးလိုက်၊စကားပြောလိုက်နဲ့နေရတဲ့နေရာကလည်း နေ့မှန်းမသိ ညမှန်းမသိနဲ့ မနက်/ည ပြောနေချိန်မှာ နာမည်တွေ အော်ခေါ်ပြီး
​ဆေးရုံစာအုပ်မှာ E.C.Gတွဲထားပြီး ဓာတ်မှန်ပါပေးပြီး မိမိနေရာ မိမိထိုင်ခိုင်းထားကြတယ်၊တစ်ချိန်ထဲမှာဘဲ ကျနော့်ရှေ့က ၂ရက်ကျော်ရောင်နင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အမည်တွေအော်ပြောပြီး အထုပ်အပိုးပြင်ဆင်ခိုင်းတာကြားရမြင်ရချိန်မှာ
သူတို့တွေကသွားရတော့မှာမို့ ပျော်ရွှင်နေတာကို မြင်တွေ့ရတော့အံသြမှုတွေနဲ့ကျနော် နားလည်ရခတ်သွားရပြီလေ၊အဖြေကလည်းကောင်းလိူက်တဲ့အဖြေထွက်ကြတယ် (၂၃)ယောက်မှာ(၂၁)ယောက်က Positive အဖြေထွက်ရှိပြီးနှစ်ယောက်ထဲသာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြတယ်။ကျ​နော်
အရှေ့တည့်တည့်က ကုတင်လေးပေါ်ကမိတ်ဆွေကတော့ ပျော်ရွင်ကြည့နူးစွာနဲ့ ကျနော့ကို”အစ်ကိုကြီးရေ ဒီနေရာမှာ လာနေလိုက် ဟိုမှာ ဆေးတွေအများကြီး ရှိသေးတယ် သန့်ရှင်းရေကိုစိတ်သန့်တဲ့အထိလုပ်ပြီး စိတ်ညစ်ခံလိုက်အုံးကျနော်တို့ကတော့ ပျော်နေပြီ
လွတ်မြောက်သွားပြီအစ်ကို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ ဖောင်ကြီးကစောက်နေမယ်ဆိုပြီးပြောတော့ ကျန်ရှိသွားရမဲ့သူများကပါပျော်ရွှင်မှုတွေအပြည့်နဲ့နူက်ဆက်ကြပေါ့လေ၊သူတို့ထွက်ခွာသွားတော့ ဝမ်းနည်းစွာ ကျန်နေခဲ့ရင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး
ကုတင်ပေါ်ခဏတက်ရောက်ပြီးမအိပ်ရသေးတော့ ခါးလေးဆန့်နေချိန်မှာ ဆရာဝန်(၄)ယောက် တစ်ဦးချင်းစီကို စကားတွေမေး၊ဖဓာက်မှန်နဲ့သွေးအဖြေကြည့်တော့ ကျနော်လည်း သွေးနဲ့ဓာက်မှန်အဖြေကိုမေးကြည့်တော့ ကျနော့်ကို
စိတ်ရှည်စွာနဲ ရှင်းပြပြီးဦးလေးအကုန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်ရချိန်မှာငါဆေးရုံကြီးလာလိုက်တာ မှားများမှားသွားပြီလားဆိုပြီး တွေးတော့မှုဖြစ်မိသွားသေးတယ်၊သို့သော်လည်း ကောင်းမွန်သောရလတ်ကြောင့် စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်
အဲလိုနဲ့(၁၁:၁၅)လောက်မှာကိုနအီး ဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ် အရှေ့ရောက်ပြီ ထမင်းနဲ့မှုန့်တွေကွမ်းယာတွေပါတယ်ဆိုလို့ ချက်ခြင်းသွားယူချိန်မှာဟ ထားတဲ့ တံခါးကနေ မျက်နာလေးတွေ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဘဲ တွေ့မြင်နူက်ဆက်ရတာကလည်း
စိတ်ခွန်အားအတွက် အားဆေးဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့၊ကျနော့်ရင်ထဲမှာကတော့ ဒီလိုကာလအချိန်၊ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေရဲ့ပိုးပြန့်ပွားနေတဲ့နေရာမှာကျနော့်အတွက်စောက်ရှောက်ရိုင်းပင်းကူညီနေတဲ့ ကိုနအီးကို ရင်ထဲကနေဘုရားစာတွေရွတ်ဖတ်ပြီး
​မေတ္တာတွေပို့သနေရတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ကျနော်မပြောတော့ဘူး ​ပေါ့လျော့တဲ့စကားဖြစ်မှာစိုးရိမ်မိတယ်၊ကျနော် ကိုနအီး ပို့တဲ့ ထမင်းကို အရသာမရှိ၊အနံမရဘဲ စားနေချိန်မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ တိတိမှာ နာမည်အော်ခေါ်တော့​ ပါးစပ်ထဲကထမင်းကို
ကုန်အောင်မျိူချ ရေသောက်ပြီး သွားလိုက်တော့နာတို့ပတ်/အာခေါင်တို့ပတ် ယူတယ်လေ(လုံးဝ နာကြင်မှုမရှိဘဲအာခေါင်ယား)မိမိနေရာလေးပြန်ရောက်ပြီ ခဏဘဲ ထိုင်မိသေးချိန်မှာဗိုက်ပြသနာက စတက်ပြန်ရော၊အိမ်သာသွားပြန်တော့လည်း
တန်းစီစနစ်အတိုင်း မိမိအလှည့်လည်းရောင်လို့ ဝင်လည်းဝင်ရော မမြင်ဖွယ်ရာတွေ ပြည့်စုံနေတဲ့ အရာတွေ မြင်တွေ့ရချိန်မှာ မိမိနာခေါင်း(Mask)အပေါ်ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်(အနံလုံးဝမရလို့ ဖြစ်နေတာတောင် အနံရသကဲ့သို့ရွံရှာပြီး
နာခေါင်းပိတ်ပြီးထွက်လာခဲ့ရတဲ့ မိမိဖြစ်စဉ်ကို)ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘဲ ပြုံးမိလိုက်ပြီး စတင်ကြံစည်ပါတော့တယ်ဒီအရေးပေါ်ဌာနကိုလည်း နည်းနည်းနီးစပ်မှုရှိတော့ ယ္ခုမှ သီးသန့် Covid သမားတွေအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ အတွဲလိုက်အိမ်သာကို ရောက်အောင်သွားပြီး
ကိစ္စကြီးကို ရှင်းလိုက်ရတော့နေသာထိုင်သာနဲ့ ပေါ့ပါးသွားတယ်။မိမိနေရာပြန်ရောက်တော့မနေ့ကထဲက တစ်မှေးတောင်မရသေးလို့ ခဏလဲလိုက်ရာအိပ်ပျော်သွားပြီး ညနေ(၆:၀၀)နာရီလောက်မှာ လန့်ပြီးနိုးသွားတယ်၊နိုးလာတော့
ဝက်တစ်ရှူးနဲ့ မျက်နာသစ်သလိုလုပ်လိုက်ရတာပေါ့၊ရေကိုလည်းတစ်အားချိူးပြစ်လိုက်ချင်ပြီလေ။ ခုနှစ်နာရီထိုးတော့ ကိုနအီးနဲ့ကိုရိုမီတို့လာပို့တဲ့ထမင်းကို စားပြီး အနံနဲ့အရသာမသိဘဲနဲ့ဂျင်းလက်ဘက်ရည်ကို တစ်ငုံချင်းသောက်နေမိတယ်၊ဒီလိုနဲ့
(၉:၀၀)နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ဝင်လာမဆဲ တသဲသဲဖြစ်နေတဲ့ လူကြီးလူငယ်တွေငေးကြည့်လိုက် အကူအညီတောင်းရင် ရှင်းပြပြောဆိုလိုက်နဲ့အဝင်/အထွက် ဂိတ်ပေါက်မှာ အထဲက ဆရာကြီးလို ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာရောဘဲ၊ ကျနော်ရထားတဲ့ ကုတင်နေရာက
နံပါက်(၁)ဆိုတော့မြင်နေကြုံကြိုက်နေရတော့လည်း အချိန်ကြာလာသည်နင့်အမျှရာနူန်းပြည့် သဘောပေါက်မိလာတော့ ဝင်လာတဲ့သူတွေထဲမှာသမာရိုးကျဖြစ်စဉ် သွေးတိုး၊ဆီးချိူမကျတာတို့၊နှလုံးအောင့်တဲ့သူ၊ကိုဗစ်မဟုက်ရင် ဝင်မနေနဲ့လို့
တားမြစ်မိတယ်၊လူတွေကလည်းမရပါဘူးအတင်းဝင်တော့ မကြာပါဘူး Covid ကူးတော့တာပေါ့၊ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနကြီးလို ဖြစ်နေတော့တွေးကြည့်လေ သိရှိလေ ပြေးချင်လေပေါ့ဗျာ၊ကျနော်လည်းမနက်လေးနာရွလောက်မှာ အိပ်ပျော်သွားပြီး
၈:၀၀ မထိုးခင်မှာဘဲအရင်ရက်အတိုင်း အသံတွေကြောင့် လန့်နိုးသွားတာပေါ့၂၃.၉.၂၀၂၀ နံနက်ပိုင်း နိုးလာတော့ ဝက်တစ်ရှူးနဲ့မျက်နာသစ်ပြီး ခိုးသွားရတဲ့ အိမ်သာကိစ္စရှင်းပေါ့၊ မှုန့်လေးစားပြီး ဆရာတွေရှိသွေးပေါင်တိုင်း သွေးချိူဖောက်စစ်ပေါ့လေ
ကျနော်တို့ Result ဘယ်တော့ရမလဲ မေးတော့ မနက်ဖြန် မနက်မှဆိုပြီး ပြန်ကြားကြားခြင်းထွက်ပြေးချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း လေးစားသမှုနဲ့သနားမိတယ်PPEဝတ်စုံတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာ ကိုယ်ချင်းစာမိသလို
​သောကအပူတွေနဲ့ ဒုက္ခခံနေရတဲ့ လူနာတွေကိုဗစ်အကူးခံလိုက်ရတဲ့ လူကောင်းလူနာစောက်တွေ အနည်းဆုံးလူ (၂၀၀)ဟာ အောက်ထစ်ဘဲလေ ကျနော်လည်း အပေါက်ဝနားမှာနောက်မှရောက်လာတဲ့သူတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးရင်းနဲ့
ကူညီနေရရင်း တစ်ရက်သာ ကျော်ဖြတ်နေရင်း ည(၂:၀၀)နာရီလောက်မှာ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်။၂၄.၉.၂၀၂၀(လူလည်းသက်ချင်/ ပျော်လည်းပျော်) နံနက် စောစောဆူလောင်အော်ဟစ်နေတဲ့ စကားရိုင်းသံတို့ကြောင့်ထထိုင်မိလိုက်တယ်
အောင်စီဂျင်အိုးကြီးရှူနေရတဲ့ သူက ရူးသလိုလို ကြောင်သလိုလိုနဲ့ တစ်ယောက်တည်း အော်ဟစ်ပြောဆိုနေပြီးအပေါက်ဝတံခါးကို လက်နဲ့ရိုက်နေတော့ ကျနော်ဝန်ထမ်းတွေကို သွားခေါ်နေချိန်မှာဘဲ အိုးကြီးထိပ်ပိုင်းနဲ့ လှဲတိုက်ပြီး
မှန်ချပ်ကြီးကိုခွဲပစ်လိုက်တဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ် ၊ကျနော်နဲ့ ဆရာဝန်မတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပြေးလာချိန်မှာလူအားလုံးနီးပါးက မျက်နာချင်းဆိုင် ကယ်ကြပါအုံးဆိုပြီးဆန့်ကျင်ဘက် ပြေးလာကြ​ရော အောက်စီဂျင်အိုးကြီးလည်း
လေကတစ်အားထွက်ပြီးရေဗူးလည်းကွဲနေပြီး အိုးလဲနေတာတွေ့မြင်ရသလိုအဲဒီ့ပြသနာကောင်ကိုလည်း တော်တော်ထိန်းချူပ်ထားရတယ်၊ဒါပြင် ကျနော်တို့ Covid သံသယဆောင်က တံခါးကြီးကတော့ ​ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီး ဖြစ်သွားတာတစ်နာရီကျော်လောက်ရှိမယ်။
ဝန်ထမ်းတွေ လုံခြုံရေးတွေ ရောက်ရှိလာတယ် ပလတ်စတစ်နဲ့ အမြန်ဆုံး တံခါးဖြစ်ရအောင် ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်ဘေးတံခါးကတော့ ၂ပေကျော်ပက်လည် ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေတာ ဘယ်ရက်အထိကြာလဲဆိုတာ
မသိလိုက်တော့ဘူး၊ဒီလိုနဲ့ကျနော့ညီအစ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ ပိုးတွေတော့အပြင်ကို ထွက်ချင်တိုင်း ထွက်သွားပြီ ကိုနအီးလာရင်တော့သတိကြီးမားစွာ ထားတော့လို့ ပြောဆိုမိပြီး စိတ်ဖြေနေလိုက်ရတယ် မနက် (၁၀:၃၀)ခွဲလောက်မှာ
ဦးထင်အောင်လင်း အထုက်ပြင်ပါပြီးရင် ကားပေါ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်ရတော့ပျော်လိုက်တာနဲ့ ယခင်ရှေ့ကလူတွေအတိုင်း ဝမ်းသာနေကြတာပေါ့၊Positive ဖြစ်သွားလို့ ဝမ်းမနည်းမိဘူး လူနာဦးရေနဲ့
ဆရာဝန်၊သူနာပြု ၊ ​နေရာထိုင်ခင်း၊ အိမ်သာစတဲ့ အစီအငေါ်မတည့်တဲ့Covid ဖြန့်ချိရေးဌာနကြီးမှ လွတ်မြောက်နိုင်တော့မည့်အခြေအနေကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားဘူးတဲ့သူတွေမှသိရှိနိုင်မယ်လေ၊
ကျနော်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှုတွေနဲ့ကားကြီးပေါ်ကို အများသူငါ တွေလို ကျေနပ်စွာ တက်ပြီးရိုးမအိမ်ရာသို့ ​နေ့လည် (၁:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်
Covid-19 ရနျကုနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးသို့ရောကျရှိသှားပုံနငျ့ ကိုယျတှေ့ ကွုံ ရမှုမြား(အစ အဆုံး ဖတျကွညျ့ စခေငျြ)
ကနြျောဟာ ၂၁.၉.၂၀၂၀ နလေ့ညျ (၃:၀၀)နာရီခနျ့မှာ ရခြေိူးရငျး သှားတိုကျသညျ့အခါသှားတိုကျဆေးရနံမရတော့လို့ ခကျြခွငျး ကွကျသှနျနီကို အခှံခှာကာ ခွမျး၍ ပါးစပျထဲထညျ့ကွာကွိတျဝါးကွညျ့ပွီး အနံ့ အာရုံ ခံသျောလညျး ဘာအနံမှ မရသလို ဖွဈလာသျောကွောငျ့
ကနြေျာ့တူတျောမောငျကို အဝတျအစားတောငျးယူကာလှဲလညျ ဝတျစဉျပွီး ထမငျးစားပှဲရှထေို့ငျကာ ပုဇှနျဟငျးနငျ့ ထမငျး သုံးလေးလုပျစားကွညျ့ပါသျောလညျး ဟငျးအနံ မရ၊ ကွကျသှနျဖွှူဈဥကို ပါးစပျထဲ ထညျ့ပွီး ကွိတျဝါးပွနျသျောလညျး
အရသာပါ ပြောကျဆုံးနသေညျကို စိုးရိမျစိတျဖွငျ့ သိရှိရလိုကျခြိနျမှာ ငရုတျသီးစိမျး(ယမနျနကေ့ စားခဲ့သော၊အလှနျစပျလှသော) နှဈတောငျ့ကို တဈပွိုငျနကျ ကွိတျဝါး၍လြှာအနှံ့စပျသညျ့အရသာအနံမရသညျ့အပွငျလှညျ့တငျထိတှခေံ့စားကွညျ့ပွနျတော့လညျး
ဘာမှ မသိရှိရသညျ့အတှကျ တူဖွဈသူအား အကြိူးအကွောငျး ရှငျးပွ၍အဝတျအစားမြားထညျ့စေ၍ ရပျကှကျ အုပျခြူပျရေးမှုးလညျးဖွဈ၊ငယျသူငယျခငျြးလညျးဖွဈသူဦးဇျောဝငျးထှနျး(ခ)ကိုပေါကျစီထံ အားကိုးတဈကွီးမြားစှာနဲ့ဖုနျးဆကျလိုကျသောအခါ
ပွနျကွားလိုကျတဲ့ စကားသံကတော” အေး..သူငယျခငျြးကိုလငျးရေ..ငါရယျ၊အသေးလေးရယျ ဆေးရုံကွီးကို သှားပို့တဲ့အမကွေီးက ငါတို့ပို့ပွီး နာရီဝတျတောငျ မကွာဘူး ဆုံးသှားတယျလေ၊မငျးသိတယျ မဟုကျလား?အေး
အခု အဲဒီ့ အမကွေီးကို ငါတို့တှေ ထိထိရောကျရောကျ အိမျပျေါကနအေောကျခပြွီးဆေးရုံကွီး အရေးပျေါကို ပို့ခဲ့လို့လေ၊အခု အဖွထှေကျလာပွီ (positive)တဲ့ အခု ငါနဲ့ အသေးလေးလငျဝှရေူံ့မှာ Q ဝငျရတော့မယျကှာ”ဆိုတဲ့စကားသံ ကို နားဝမှာ ကွားမိ သိရှိလိုကျခြိနျမှာ
ရငျထဲမှာစို့နငျ့သှားမိတယျ၊အဲဒါနဲ့ ကနြျောလညျးငါကတော့ အနံနဲ့အရသာ ပြောကျဆုံးသှားပွီဆေးရုံကွီးသှားခငျြတယျ ကူညီပါဆိုပွီး တောငျးဆိုမိလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ ၊အုပျကွီးက မွို့နယျကနျြးမာရေးကို ဖုနျးဆကျခြိတျဆကျပေး၊မှာစရာရှိတာတှေ မှာကွားပွီး ဖုနျးခလြိုကျမိတယျ။
စိတျတှငျးထဲမှာတော့ အုပျကွီးရယျညီငယျလေးစိုးသူရယျ(အသေးလေး)၊ကနြျောရယျ သုံးယောကျလုံးတဈရကျထဲ တဈခြိနျထဲမှာ ဖွဈရကွုံရလခွေငျးဆိုပွီး ရငျထဲမှာဝမျးနညျးအားငယျမိနမေိပွီး ငါတို့ဖို့မွပေရဟိတကမြှ သုံးယောကျပွိုငျ ဖွဈရလခွေငျးဆိုပွီး
စိတျတှရှေုတျထှေးနမေိပွီး အုပျကွီးရှီဖုနျးထပျမံဆကျမိတော့ အုပျကွီးက”ကနျြးမာရေးဌာနကိုဖုနျးဆကျထားပွီးပွီ မငျးရှီဆကျလမေ့ယျ”ဆိုတဲ့စကားကွားရပွီးငါးမိနဈလောကျမကွာခငျမှာဘဲကနျြးမာရေးမှဆရာမက အကြိူးအကွောငျးမေးမွနျးတာကို ပွနျဖွပွေီးတာနဲ့
ခကျြခွငျးသတိရသှားမိတဲ့ ကိုနအီး(ဦးဝငျးမွငျ့)ရှီကိုဖူနျးဆကျပွီးဖွဈကွောငျးရယျတဲ့ကုနျစငျ ရှငျးပွပွီး ဆေးရုံကိုသာမွနျမွနျသှားရောကျလိုကွောငျး တောငျးဆိုမိလိုကျတယျ။တဈအောငျ့လောကျအကွာမှာ ကိုနအီး(ဦးဝငျးမွငျ့ထံမှ ဖုနျးဝငျလာပွီး နာရီဝတျအတျောအတှငျး လာချေါမညျ
အစဉျသငျ့လုပျထားပါလို့ပွောတော့ ကနြျောကလညျး အစဉျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ ပွနျပွောလိုကျတယျ၊အဲလိုနဲ့ ၁၅မိနဈလောကျအကွာမှာ ကားရောကျလာပွီ ပွောတာနဲ့မိုးဖှဲဖှဲမှာ အိတျလှယျပွီး လငျးနို့ကားပျေါ တဈယောကျတညျး ထိုငျကာစံပွဆေးရုံသို့ ဦးတညျရာသို့ လိုကျပါလာခဲ့တယျ။
သဃျာကြှနျး စံပွဆေးရုံရောကျတော့ ကားပျေါမှာနာရီဝတျကြျောထိုငျနရေပွီး လူနာတှေ မြားလှနျးလို့ လကျမခံနိုငျတော့ဘူးဆိုလို့ကိုနအီး(ဦးဝငျးမွငျ့)ကY.R.Oနဲ့ ခြိတျဆကျကာ ရနျကုနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးကို ပွနျလညျဦးတညျလာရာ အရေးပျေါ ဌာနရောကျ၍
မေးမွနျးမှုကိုပွနျလညျဖွကွေားခြိနျမှာမွို့နယျကနျြးမာရေးရဲ့လှဲစာလကျမှတျပါရဲ့လားလို့မေးမွနျးခြိနျမှာ ကနြျောတို့မှာ မပါပါဘူးလို့ ကနြျောပွနျဖွဆေိုခြိနျမှာကိုနအီးက ဆရာတို့ခငျဗြာ ကနြျောတို့က Volunteer လုပျနတေဲ့သူတှပေါ ကိုလငျးMask ခြှတျပွီး
မကျြနာပွလိုကျလဆေိုပွီးပွောတော့ကနြျောလညျး Maskကို မွနျမွနျမေးအောကျကို ခြှတျပွလိုကျတော့ ဟာ အဈကိုကွီး ဘယျလိုဖွဈတာလညျးဆိုပွီး ဂရုဏာနဲ့မေးမွနျးပွီး ဆေးရုံထဲကို ခကျြခွငျး ဖုနျးဆကျသှယျပေးပွီး ဝငျ/ထှကျအပေါကျဝရဲ့စတီးလေးခုံတှဲမှာ ထိုငျခိုငျးထားတယျ။
၁၀မိနဈလောကျနတေော့ Covid သံသယအဆောငျထဲက ဆရာဝနျက ဖွဈပျေါခံစားနရေတဲ့အကွာငျးနဲ့ ရှတေ့ဈပတျကြျောက ကိစ်စတှေ ဆကျနှယျပတျသပျမှုအခကျြအလကျတှကေို စုံစမျးမေးမွနျးပွီးတော့မှ စကားတဈခှနျးပွောဆိုပါတယျ၊
စကားကတော့ ဝငျ ပွီးရငျ ပွနျ ထှကျလို့မရဘူး*ဆိုတဲ့ စကားလေးပါ ၊သူမြားတှကေတော့ ဘယျလို ခံစားမလဲ မသိပွငျမဲ့ကနြျောကတော့သဘောတှကေပြွီး ကနြေပျနမေိတယျလေ၊ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ စဈဆေးမှု(P or N)ကို သိရှိရမယျ၊
(P)ဖွဈခဲ့ရငျတောငျ ကုသမှုမွနျမွနျခံယူရမယျဆိုပွီး အတှေးမြားစှာနဲ့ဖွဈလိုကျ ဘုရားစာတှစေိတျထဲကနေ ရှတျဖတျလိုကျ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ကိုနအီးနဲ့ကိုဟာရှငျတို့နှဈယောကျကို မကျြနာငယျလေးနဲ့အားငယျစှာနဲ့ အားကိုးတကွီး ကွညျ့လိုကျနဲ့ဗြာမြားစှာနဲ့ဖွဈနခြေိနျမှာ
စိတျတှငျးကဂနာမငွိမျ ဖွဈနတောကို ပွနျလညျ သုံးသပျမိလိုကျပွီး အျော”ငါတို့တှေ အရေးပျေါ လူနာတှေ ၊နာမကနျြးလူနာနဲ့ သံသယလူနာတှကေို ဒီလောကျပို့ဆောငျနတေဲ့အတှအေ့ကွုံရှိရကျသားနဲ့ ငါအခုကိုယျတိုငျဖွဈလညျးဖွဈရော အနွေ်ဒမဲ့လိုကျတဲ့စိတျဖွဈနတော
ဘာကွောငျ့လညျးလို့ သုံးသပျမိပွနျတယျ၊အဲဒီ့မှာတငျ အဖွထှေကျလာကတော့ ပုထုစဉျသဘာဝအရ အတ်တဘောကွီးဆိုတာ သုံးသပျမိလိုကျတယျ”၊အတှေးထဲမွောနခြေိနျမှာဘဲ P.P.E ဝတျစုံတဈယောကျကဦးထငျအောငျလငျး ဝငျမယျဆိုပွီး
တံခါးဟကာ အျောပွောတော့ ကနြျောလညျး အိတျကိုဆှဲပွီးသူငယျခငျြးနှဈယောကျကို နူတျဆကျကာရငျထဲမှာ ဝမျးနညျးစို့နငျ့စှာဖွငျ့ အပေါကျဝမှ တံခါးမှုးကသံကွိုးဖွငျ့ခြီရဈထားသော သံကွိုးကိုဖွကော တဈကိုယျစာ…မှနျစလိုကျထိုးတံခါးကို ဟ ပေးသောကွောငျ့
ခေါငျးငုံပွီးအဆောငျ ကျောရီတာလှမျးဝငျလိုကျခြိနျမှာ မွငျတှလေို့ကျရာကတော့အမြားကွီး အမြားကွီးမှ အမြားကွီး လူတှေ လူတှအေရှယျပေါငျးစုံတှေ အရမျးအံအျောမိသှားတယျ PPE နဲ့ လာချေါတဲ့သူက ဆရာဝနျတှေ ရှိတဲ့နရောကိုဒီတညျ့တညျ့သှားလိုကျပွီး
ညာဘကျကို ကွညျ့လိုကျရငျတှမေ့ယျလို့ လမျးညှနျပွောဆိုတော့ကနြျောကလညျး ဟုကျကဲ့ခငျဗြာ့ဆိုပွီး ပွနျလညျပွောဆိုပွီး ဝဲဘကျယာဘကျတှကေို အံအျောတုနျလှုပျစှာနဲ့ စူးစမျးကွညျ့ကာလြောကျရငျး ဆရာဝနျလားသူနာပွုလား ခှဲခွားလို့ မရတဲ့ PPEဝတျထားတဲ့
အလယျကောငျတာ မဟုကျတဲ့ယာဘကျကွောကပျထားတဲ့ ကောငျတာကို ရောကျရှိသှားပါတယျ(သူမြားတှထေကျ ကနြျောတဈဗနျးသာနတောကတော့အရေးပျေါလူနာတှကေို ယခငျကာလတှတေုနျးက ပို့ဘူးထားတော့အစိမျးသကျသကျကွီးတော့ မဟုကျဘူးလေ)
ကောငျတာရှရေ့ောကျတော့Dr? Nurse? မသိရတဲ့ မေးသမြှကို ဖွကွေားလိုကျတယျ၊ယခငျရောဂါ ဘာအခံရှိလညျးလို့လညျး တိတိကကြမြမွေနျးတာကိုတော့သတိထားမိသလို လေးစားမိသှားတယျ၊မေးမွနျးမှုပွီးသှားခြိနျမှာ ကနြျော ဘယျမှာနရေမလဲ?လို့မေးခြိနျမှာ
လှတျတဲ့နရောလှတျတဲ့ကျောထိုငျခုံမှာထိုငျလို့ရတယျ ဦးလေး*ဆိုပွီးပွနျဖွလေိုကျတာကွားလိုကျရတော့ သဘောပေါကျစပွုမိသှားပွီ၊ကနြျောနောကျထပျမေးခှနျးထပျမေးမိတယျ”ဆရာမရေ ကနြေျာ့ကို Swab ဘယျတေျာ့လောကျ ယူမှာလဲ?လို့ မေးမိပွနျတော့
မနကျဖွနျမှဆိုတော့ ကြေးဇူးပါလို့ပွနျပွောမိရငျး အိတျမွနျမွနျဆှဲကာ ကနဦးဝငျ/ထှကျပေါကျ အနီးကို သုတျခွတေငျလာပွီးလဈဟာနတေဲ့ သံမံတလငျးကှကျပျေါ ဖိနပျခုထိုငျရငျးနဲ့ အပွငျကကိုနအီး နဲ့ ကိုဟာရှငျကို အကြိူးအကွောငျးပွောပွလိုကျတာနဲ့တခဏအတှငျးမှာဘဲ
မွကျဖြာ၊ခေါငျးအုံး၊စောငျနဲ့ စားဖို့သောကျဖို့ပါခကျြခွငျးပို့ပေးတယျနာရီကို ကွညျ့မိလိုကျတော့ ၈:၀၀နာရီထိုးတော့မယျ၊အဲဒါနဲ့ အုပျကွီးရှိ ဖုနျးလှမျးဆကျ၊အိမျနဲ့သူငယျခငျြးတှရှေီ အကြိူးအကွောငျးရှငျးပွတုနျး ကနြေျာ့နာမညျ လှမျးချေါတော့
ပကျဝနျးကငျြကလူတှကေို အထုပျလေးကွညျ့ပေးပါပွောပွိး သုပျခွမွေနျမွနျတငျရတာပေါ့၊ သှားရာလမျးမှာလညျးရငျစို့စရာမွငျကှငျးတှဘေဲကွံကွိုကျနရောတာပေါ့လေ၊ဟိုရောကျတော့သှေးခြို/ဆီးခြိူဆေးနဲ့သှေးတိုးဆေးတှပေါလားဆိုတော့
ကနြျောကခေါငျးညိတျရငျးပါတယျပွောပွပေါ့၊ဒါဆိုရငျ Vitacee အပွငျမှာဝယျပွီး တဈနတေ့ဈလုံးသောကျပါ၊ကမြတို့အျောချေါသံကိုလညျးဂရုစိုကျပေးပါဆိုပွီး ပွောတော့ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာနဲနဲအခဉျြဖောကျမိသှားတယျ၊သို့သျောလညျး ဟုကျကဲ့ပါဆရာမ၊
ကြေးဇူးပါ ဆရာမလို့ပွောပွီး မိမိနရော မိမိပွနျရောကျခြိနျမှာ ကနြေျာ့ရှကေ့ ၂ရကျ ကွိုရောကျနငျ့ပွီးနတေဲ့သူတှကေ Vitacee ဝယျခိုငျးတာလားဆိုပွီး တနျးပွောလိုကျတော့ အံသွမိသှားတယျ ၊ဒါနဲ့ အပွငျက ကိုနအီးကို ဖုနျးဆကျမှာတော့ ခကျြခွငျးလာပို့တယျ
လကျဖကျရညျလညျး ပါလာတော့ အားရဝမျးသာဖွဈမိပွီးပူပူလေး မှုတျသောကျခြိနျမှာ ဘာအရသာ၊ဘာအနံမှမရတာပွနျခံစားမိခြိနျမှာ မကျြရညျဝဲမိသှားတာကိုကနြော့ရှတေ့ညျ့တညျ့ကုတငျပျေါကညီငယျက ခကျြခွငျးအောကျဆငျးလာပွီး
အဈကိုရေ ဘာမှအားမငယျနဲ့ အခုကနြော့တို့ လငျမယားနှဈယောကျလုံးက အနံရော၊အရသာရော၊ဝမျးပါသှားပွီးကိုယျတှပေူလို့ ရှနှေ့ဈရကျထဲက ရောကျနကွေတာမနကျဖွနျညမှ Swab Result ထှကျမှာဒီက အခုရဌိတဲ့လူတှအေားလုံးက
မနကျဖွနျညကိုအဖွမွေနျမွနျထှကျစခေငျြပွီး ပို့တဲ့နရောကိုအမွနျဆုံးသှားခငျြနကွေတဲ့သူတှလေို့ ပွောပွလိုကျတော့မဂျလာမှနျဈေးနဲ့ရှပွေညျ့စုံဈေးမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့သူတှေ၅ယောကျကလညျး အားပေးစကားတှပွေောရှာကွတယျ၊စကားရှိနျတှတေငျလာပွီး
အားငယျစိတျတှေ လြော့နညျးလာခြိနျမှာရှပွေညျ့စုံဈေးက ဆရာကွီးက ဒဲ့တိုးကွီး ပွောခလြိုကျတဲ့စကားလုံးက ဒီမယျဆရာရေ ကနြျောတို့အားလုံးနီးပါးပိုးရှိဆိုတဲ့ Positive result ဘဲထှကျမှာ မွကွေီးလကျခပျမလှဲစရေပါဘူးပွောသံကိုစောစောက ကုတငျကဆငျးပွီး
နောကျထပျအားပေးတဲ့ညီငယျလငျမယားရော ၁၀ယောကျကြျောကပါ သိပျမှနျတာပေါ့ ၊အာမခံတယျ၊ ဒါအမှနျဘဲဆိုပွီး ဝငျပွောကွ ကုနျပါလရေော ဘုမသိ၊ဘမသိဖွဈနပွေီးရေးရေးလေး သဘောပေါကျစတော့ညပုလာရပွီလေ၊နောကျဆုံးကမြှ
ယ်ခငျကွိုရောကျပွီးတဲ့သူတှရေဲ့ ပွောပွခကျြကွောငျ့သူတို့လညျးအပျတကျသခြောစှာ ပွောနိုငျသှားတယျဆိုတာကိုကနြျောနာရီဝတျလောကျမှ သဘောပေါကျနာူလညျသှားရတော့တယျ။စကားတှေ ပွောရငျးနဲ့ဘဲ ၁၂:၀၀နာရီကြျောလာတော့ အလြှိူလြှိူ ထောငျ့လေးတှကေပျပွီး
လှဲကွအိပျကွတော့ ကနြျောလညျး မွတျဖြာလေးခငျးပွီး ထိုငျပွီးငေးမျောလိုကျပေါ့ ၁၅မိနဈတဈခါလောကျကို လူနာတှေ အစုလိုကျ အပွုံလိုကျဝငျဝငျလာရငျ ကနြျောလမျးဖယျဖယျပေးလိုကျပေါ့လေ၊ညညျ့နကျ တဈနာရီခှဲလောကျမှာ ကနြေျာ့ကို ထပျမံအျောချေါရပွနျရော
ဒီတဈခါတော့ ကနြျောဘယျရမလဲ ဦးစှာ ဆရာမရေ စိတျမဆိုးပါနဲ့နျောကနြျောက ဟိုအဝငျထိပျမှာ နေ နလေို့ပါဆိုပွီး တောငျးပနျလိုကျတယျ၊လကျဖွနျကနေ သှေးဖောကျယူတာ အကွောကရှာလို့မရ၊အပျကလညျးအကွီးကွီး၊အကွောမိပွနျတော့လညျး
သှေးက နညျးနညျးလေးဘဲစုပျယူလို့ရတယျ၊ရတဲ့သှေး ပွှနျလေးထဲ ထညျ့ပွနျတော့လညျး သှေးက ပွဈခဲနပွေနျတော့ ထညျ့မရတဲ့နောကျဆုံး အပျဖောကျရာလညျး မြားတာနဲ့ဆရာမက အားနာတဲ့လသေံနဲ့ ဦးရယျ မနကျမှဘဲဖောကျယူတော့မယျ
အပျအရာတှလေညျး မြားသှားပွီဆိုပွီး ဂရုဏာသံနဲ့ ပွောရှာတယျ၊ကနြျောက နာရီဝတျဘဲ စောငျ့ပါ ပွနျလာခဲ့မယျပွောပွီး၊မိမိနရောလညျးရောကျရော လကျကို လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျစိတျကို တညျငွိမျစှာထားပွီး ညာလကျဖြံကို သှေးပူအောငျ ပှတျနလေိုကျတယျ
၁၅မိနဈလောကျကွာပွီးခြိနျမှာ ကနြျောပွနျသှားပွီး”ဆရာမရေ ဖောကျကွညျ့တော့ ရပွီဆိုပွီး ဖောကျခိုငျးလိုကျတော့တဈခငျြထဲနဲ့ အစဉျပွသှေားတယျ ထှကျလာတဲ့သှေးကလညျးစုပျတာနဲ့ အစဉျပွစှော ထှကျလာတော့ဆရာမလညျး အံအျောပွီး ဘာလုပျလိုကျလညျးလို့မေးတော့
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလိုကျတယျ အရငျတုနျးက သှေးလှူနကွေလသှေေးတိုး/ သှေးခြိူဝငျသှားလို့ ယ်ခုနှဈနှဈကြျောပွီ မလှူဖွဈတော့တာဆိုပွီး ကွှားလုံးသုံးလိုကျမိတယျ”တဈခါ ကိုယျ့နရောကိုယျပွနျရောကျပွီးထိုငျခါစဘဲ ရှိသေးတယျ ထပျချေါပွနျရော
E.C.G ဆှဲပေးပွနျရော ခကျြခွငျးကနြျောမေးမိတယျ အဖွကေ ကောငျးတယျတဲ့ ကနြျောပြျောပွီးကိုယျ့နရောမှာ ကိုယျပွနျထိုငျလိုကျပွီး ရတေဈဝကွီးသောကျဖွဈလိုကျတယျ ၁၅မိနဈ နာရီဝကျလောကျဆိုရငျ တဈခါလာပွနျပွီ
အစုလိုကျရောတဈဦးခငျြးရော ကနြျောလညျး နောကျဆုံး ဘယျလိုမှ ထိုငျလို့မရတော့တဲ့ အဆုံး စူးစမျးလလေ့ာရေးကို စတငျလိုကျပါတော့တယျ လူနာအမြားစုနဲ့ဝသေနာရှငျအမြားစုဟာ မသဲကှဲတဲ့အခွအေနကေိုရောကျရှိနကွေပါတယျ၊တဈခြို့က အစာအိမျဖွဈလို့၊
ရငျဘကျအောငျ့လို့၊သှေးတိုးလို့၊နံရိုးနာလို့(ကနြော့မိတျဆှေ-လှတျလပျရေးရပျကှကျ)ခေါငျးကွီးထိုးနလေို့၊သှေးခြိူတကျနလေို့စတဲ့ လူနာတှနေဲ့ ကနြျောတို့လို Covidတှနေဲ့ ရောနှောနကွေပါတယျ၊ ဒီလို အလုံပိတျအဆောငျကို ရောကျရှိတာနဲ့ ပွနျလညျထှကျလို့မရသလို
Auto သံသယ လူနာ ဖွဈသှားရပါတယျ။ကနြျောလညျး ညောငျးညောငျးရှိတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ဘူမိဗိမ်မာနျလေးမှာခွဆေငျးထိုငျနရေငျး သုံးနာရီကြျောလောကျမှာ အသကျ၈၅ ကြျော အမကွေီးတဈယောကျ ရောကျရှိလာပါတယျ၊အဈမတဈယောကျကထပွီးနရောပေးလို့ ထိုငျတော့
ဝိုငျးမေးကွပေါ့လေ သှေးတိုးပွီးရငျဘကျကွီးတောငျ့လို့တဲ့ အကုနျလုံး ဂရုဏာ ၊မတ်ေတာတှနေဲ့ဆကျဆံကွပေါ့၊အဲလိုနဲ့(၂၁.၉.၂၀၂၀)ကနေ (၂၂.၉.၂၀၂၀)ရဲ့နံနငျခငျးကို ရောကျရှိသှားပါလရေော၂၂.၉.၂၀၂၀ နံနကျ (၆:၀၀)နာရီ မထိုးခငျ ကနြေျာ့ နာမညျအျောချေါတော့
အပွေးအလှားသှားပွီးရောကျတော့ ဓာကျမှနျ ရိုကျရမယျဆိုလို့ဓာကျမှနျခနျးထဲဝငျရိုကျပေါ့လေ ၊အထှကျမှာ အလှငှလေေးဆိုတော့ ထညျ့လိုကျရသေးတယျ၊အပွနျမှာ အပေါ့သှားခငျြလို့ သညျးခံပွီးနာရီဝတျကြျောစောငျ့လညျးစောငျ့ အောငျ့လညျးအောငျ့ထားပွီးမှ
ကိစ်စရှငျးတော့တယျ၊ဒါနဲ့ မိမိနရောမိမိပွနျထိုငျရငျး ထှရောလေးပါးစဉျးစားလိုကျ၊ုတရားစာတှရှေတျဖတျလိုကျ ဝငျလာတဲ့သူတှငေေးလိုကျ၊စကားပွောလိုကျနဲ့နရေတဲ့နရောကလညျး နမှေ့နျးမသိ ညမှနျးမသိနဲ့ မနကျ/ည ပွောနခြေိနျမှာ နာမညျတှေ အျောချေါပွီး
ဆေးရုံစာအုပျမှာ E.C.Gတှဲထားပွီး ဓာတျမှနျပါပေးပွီး မိမိနရော မိမိထိုငျခိုငျးထားကွတယျ၊တဈခြိနျထဲမှာဘဲ ကနြေျာ့ရှကေ့ ၂ရကျကြျောရောငျနငျ့နတေဲ့မိတျဆှတှေရေဲ့ အမညျတှအေျောပွောပွီး အထုပျအပိုးပွငျဆငျခိုငျးတာကွားရမွငျရခြိနျမှာ
သူတို့တှကေသှားရတော့မှာမို့ ပြျောရှငျနတောကို မွငျတှရေ့တော့အံသွမှုတှနေဲ့ကနြျော နားလညျရခတျသှားရပွီလေ၊အဖွကေလညျးကောငျးလိူကျတဲ့အဖွထှေကျကွတယျ (၂၃)ယောကျမှာ(၂၁)ယောကျက Positive အဖွထှေကျရှိပွီးနှဈယောကျထဲသာ အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့ကွတယျ။ကနြျော
အရှတေ့ညျ့တညျ့က ကုတငျလေးပျေါကမိတျဆှကေတော့ ပြျောရှငျကွည့နူးစှာနဲ့ ကနြော့ကို”အဈကိုကွီးရေ ဒီနရောမှာ လာနလေိုကျ ဟိုမှာ ဆေးတှအေမြားကွီး ရှိသေးတယျ သနျ့ရှငျးရကေိုစိတျသနျ့တဲ့အထိလုပျပွီး စိတျညဈခံလိုကျအုံးကနြျောတို့ကတော့ ပြျောနပွေီ
လှတျမွောကျသှားပွီအဈကို့ကိုလညျး ကနြျောတို့ ဖောငျကွီးကစောကျနမေယျဆိုပွီးပွောတော့ ကနျြရှိသှားရမဲ့သူမြားကပါပြျောရှငျမှုတှအေပွညျ့နဲ့နူကျဆကျကွပေါ့လေ၊သူတို့ထှကျခှာသှားတော့ ဝမျးနညျးစှာ ကနျြနခေဲ့ရငျးသနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီး
ကုတငျပျေါခဏတကျရောကျပွီးမအိပျရသေးတော့ ခါးလေးဆနျ့နခြေိနျမှာ ဆရာဝနျ(၄)ယောကျ တဈဦးခငျြးစီကို စကားတှမေေး၊ဖဓာကျမှနျနဲ့သှေးအဖွကွေညျ့တော့ ကနြျောလညျး သှေးနဲ့ဓာကျမှနျအဖွကေိုမေးကွညျ့တော့ ကနြေျာ့ကို
စိတျရှညျစှာနဲ ရှငျးပွပွီးဦးလေးအကုနျကောငျးတယျဆိုတဲ့စကားကွားလိုကျရခြိနျမှာငါဆေးရုံကွီးလာလိုကျတာ မှားမြားမှားသှားပွီလားဆိုပွီး တှေးတော့မှုဖွဈမိသှားသေးတယျ၊သို့သျောလညျး ကောငျးမှနျသောရလတျကွောငျ့ စိတျခမျြးသာသှားတယျ
အဲလိုနဲ့(၁၁:၁၅)လောကျမှာကိုနအီး ဆီက ဖုနျးဝငျလာတယျ အရှရေ့ောကျပွီ ထမငျးနဲ့မှုနျ့တှကှေမျးယာတှပေါတယျဆိုလို့ ခကျြခွငျးသှားယူခြိနျမှာဟ ထားတဲ့ တံခါးကနေ မကျြနာလေးတှေ စက်ကနျ့ပိုငျးလောကျဘဲ တှမွေ့ငျနူကျဆကျရတာကလညျး
စိတျခှနျအားအတှကျ အားဆေးဖွဈခဲ့ရတာပေါ့၊ကနြေျာ့ရငျထဲမှာကတော့ ဒီလိုကာလအခြိနျ၊ဒီလိုအဖွဈဆိုးတှရေဲ့ပိုးပွနျ့ပှားနတေဲ့နရောမှာကနြေျာ့အတှကျစောကျရှောကျရိုငျးပငျးကူညီနတေဲ့ ကိုနအီးကို ရငျထဲကနဘေုရားစာတှရှေတျဖတျပွီး
မတ်ေတာတှပေို့သနရေတာပေါ့ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ ကနြျောမပွောတော့ဘူး ပေါ့လြော့တဲ့စကားဖွဈမှာစိုးရိမျမိတယျ၊ကနြျော ကိုနအီး ပို့တဲ့ ထမငျးကို အရသာမရှိ၊အနံမရဘဲ စားနခြေိနျမှနျးတညျ့(၁၂:၀၀)နာရီ တိတိမှာ နာမညျအျောချေါတော့ ပါးစပျထဲကထမငျးကို
ကုနျအောငျမြိူခြ ရသေောကျပွီး သှားလိုကျတော့နာတို့ပတျ/အာခေါငျတို့ပတျ ယူတယျလေ(လုံးဝ နာကွငျမှုမရှိဘဲအာခေါငျယား)မိမိနရောလေးပွနျရောကျပွီ ခဏဘဲ ထိုငျမိသေးခြိနျမှာဗိုကျပွသနာက စတကျပွနျရော၊အိမျသာသှားပွနျတော့လညျး
တနျးစီစနဈအတိုငျး မိမိအလှညျ့လညျးရောငျလို့ ဝငျလညျးဝငျရော မမွငျဖှယျရာတှေ ပွညျ့စုံနတေဲ့ အရာတှေ မွငျတှရေ့ခြိနျမှာ မိမိနာခေါငျး(Mask)အပျေါကို ပိတျပွီး ပွနျထှကျပွေးလာခဲ့တယျ(အနံလုံးဝမရလို့ ဖွဈနတောတောငျ အနံရသကဲ့သို့ရှံရှာပွီး
နာခေါငျးပိတျပွီးထှကျလာခဲ့ရတဲ့ မိမိဖွဈစဉျကို)ကိုယျ့ဟာကိုယျဘဲ ပွုံးမိလိုကျပွီး စတငျကွံစညျပါတော့တယျဒီအရေးပျေါဌာနကိုလညျး နညျးနညျးနီးစပျမှုရှိတော့ ယ်ခုမှ သီးသနျ့ Covid သမားတှအေတှကျလုပျပေးထားတဲ့ အတှဲလိုကျအိမျသာကို ရောကျအောငျသှားပွီး
ကိစ်စကွီးကို ရှငျးလိုကျရတော့နသောထိုငျသာနဲ့ ပေါ့ပါးသှားတယျ။မိမိနရောပွနျရောကျတော့မနကေ့ထဲက တဈမှေးတောငျမရသေးလို့ ခဏလဲလိုကျရာအိပျပြျောသှားပွီး ညနေ(၆:၀၀)နာရီလောကျမှာ လနျ့ပွီးနိုးသှားတယျ၊နိုးလာတော့
ဝကျတဈရှူးနဲ့ မကျြနာသဈသလိုလုပျလိုကျရတာပေါ့၊ရကေိုလညျးတဈအားခြိူးပွဈလိုကျခငျြပွီလေ။ ခုနှဈနာရီထိုးတော့ ကိုနအီးနဲ့ကိုရိုမီတို့လာပို့တဲ့ထမငျးကို စားပွီး အနံနဲ့အရသာမသိဘဲနဲ့ဂငျြးလကျဘကျရညျကို တဈငုံခငျြးသောကျနမေိတယျ၊ဒီလိုနဲ့
(၉:၀၀)နာရီ နောကျပိုငျးမှာ ဝငျလာမဆဲ တသဲသဲဖွဈနတေဲ့ လူကွီးလူငယျတှငေေးကွညျ့လိုကျ အကူအညီတောငျးရငျ ရှငျးပွပွောဆိုလိုကျနဲ့အဝငျ/အထှကျ ဂိတျပေါကျမှာ အထဲက ဆရာကွီးလို ဖွဈမှနျးမသိဖွဈလာရောဘဲ၊ ကနြျောရထားတဲ့ ကုတငျနရောက
နံပါကျ(၁)ဆိုတော့မွငျနကွေုံကွိုကျနရေတော့လညျး အခြိနျကွာလာသညျနငျ့အမြှရာနူနျးပွညျ့ သဘောပေါကျမိလာတော့ ဝငျလာတဲ့သူတှထေဲမှာသမာရိုးကဖြွဈစဉျ သှေးတိုး၊ဆီးခြိူမကတြာတို့၊နှလုံးအောငျ့တဲ့သူ၊ကိုဗဈမဟုကျရငျ ဝငျမနနေဲ့လို့
တားမွဈမိတယျ၊လူတှကေလညျးမရပါဘူးအတငျးဝငျတော့ မကွာပါဘူး Covid ကူးတော့တာပေါ့၊ဖွနျ့ဖွူးရေးဌာနကွီးလို ဖွဈနတေော့တှေးကွညျ့လေ သိရှိလေ ပွေးခငျြလပေေါ့ဗြာ၊ကနြျောလညျးမနကျလေးနာရှလောကျမှာ အိပျပြျောသှားပွီး
၈:၀၀ မထိုးခငျမှာဘဲအရငျရကျအတိုငျး အသံတှကွေောငျ့ လနျ့နိုးသှားတာပေါ့၂၃.၉.၂၀၂၀ နံနကျပိုငျး နိုးလာတော့ ဝကျတဈရှူးနဲ့မကျြနာသဈပွီး ခိုးသှားရတဲ့ အိမျသာကိစ်စရှငျးပေါ့၊ မှုနျ့လေးစားပွီး ဆရာတှရှေိသှေးပေါငျတိုငျး သှေးခြိူဖောကျစဈပေါ့လေ
ကနြျောတို့ Result ဘယျတော့ရမလဲ မေးတော့ မနကျဖွနျ မနကျမှဆိုပွီး ပွနျကွားကွားခွငျးထှကျပွေးခငျြစိတျပေါကျသှားတယျ၊ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေိုလညျး လေးစားသမှုနဲ့သနားမိတယျPPEဝတျစုံတှနေဲ့ လုပျကိုငျနတော ကိုယျခငျြးစာမိသလို
သောကအပူတှနေဲ့ ဒုက်ခခံနရေတဲ့ လူနာတှကေိုဗဈအကူးခံလိုကျရတဲ့ လူကောငျးလူနာစောကျတှေ အနညျးဆုံးလူ (၂၀၀)ဟာ အောကျထဈဘဲလေ ကနြျောလညျး အပေါကျဝနားမှာနောကျမှရောကျလာတဲ့သူတှကေို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အားပေးရငျးနဲ့
ကူညီနရေရငျး တဈရကျသာ ကြျောဖွတျနရေငျး ည(၂:၀၀)နာရီလောကျမှာ မှေးကနဲ အိပျပြျောသှားတယျ။၂၄.၉.၂၀၂၀(လူလညျးသကျခငျြ/ ပြျောလညျးပြျော) နံနကျ စောစောဆူလောငျအျောဟဈနတေဲ့ စကားရိုငျးသံတို့ကွောငျ့ထထိုငျမိလိုကျတယျ
အောငျစီဂငျြအိုးကွီးရှူနရေတဲ့ သူက ရူးသလိုလို ကွောငျသလိုလိုနဲ့ တဈယောကျတညျး အျောဟဈပွောဆိုနပွေီးအပေါကျဝတံခါးကို လကျနဲ့ရိုကျနတေော့ ကနြျောဝနျထမျးတှကေို သှားချေါနခြေိနျမှာဘဲ အိုးကွီးထိပျပိုငျးနဲ့ လှဲတိုကျပွီး
မှနျခပျြကွီးကိုခှဲပဈလိုကျတဲ့အသံကွားလိုကျရတယျ ၊ကနြျောနဲ့ ဆရာဝနျမတှနေဲ့ ဝနျထမျးတှလေညျး ပွေးလာခြိနျမှာလူအားလုံးနီးပါးက မကျြနာခငျြးဆိုငျ ကယျကွပါအုံးဆိုပွီးဆနျ့ကငျြဘကျ ပွေးလာကွရော အောကျစီဂငျြအိုးကွီးလညျး
လကေတဈအားထှကျပွီးရဗေူးလညျးကှဲနပွေီး အိုးလဲနတောတှမွေ့ငျရသလိုအဲဒီ့ပွသနာကောငျကိုလညျး တျောတျောထိနျးခြူပျထားရတယျ၊ဒါပွငျ ကနြျောတို့ Covid သံသယဆောငျက တံခါးကွီးကတော့ ဟောငျးလောငျးပေါကျကွီး ဖွဈသှားတာတဈနာရီကြျောလောကျရှိမယျ။
ဝနျထမျးတှေ လုံခွုံရေးတှေ ရောကျရှိလာတယျ ပလတျစတဈနဲ့ အမွနျဆုံး တံခါးဖွဈရအောငျ ပွနျလုပျလိုကျရတယျဘေးတံခါးကတော့ ၂ပကြေျောပကျလညျ ဟောငျးလောငျးပေါကျကွီးဖွဈနတော ဘယျရကျအထိကွာလဲဆိုတာ
မသိလိုကျတော့ဘူး၊ဒီလိုနဲ့ကနြော့ညီအဈကို ဖုနျးဆကျပွီးတော့ ပိုးတှတေော့အပွငျကို ထှကျခငျြတိုငျး ထှကျသှားပွီ ကိုနအီးလာရငျတော့သတိကွီးမားစှာ ထားတော့လို့ ပွောဆိုမိပွီး စိတျဖွနေလေိုကျရတယျ မနကျ (၁၀:၃၀)ခှဲလောကျမှာ
ဦးထငျအောငျလငျး အထုကျပွငျပါပွီးရငျ ကားပျေါတကျရမယျဆိုတဲ့ အသံကွားလိုကျရတော့ပြျောလိုကျတာနဲ့ ယခငျရှကေ့လူတှအေတိုငျး ဝမျးသာနကွေတာပေါ့၊Positive ဖွဈသှားလို့ ဝမျးမနညျးမိဘူး လူနာဦးရနေဲ့
ဆရာဝနျ၊သူနာပွု ၊ နရောထိုငျခငျး၊ အိမျသာစတဲ့ အစီအငျေါမတညျ့တဲ့Covid ဖွနျ့ခြိရေးဌာနကွီးမှ လှတျမွောကျနိုငျတော့မညျ့အခွအေနကေို ကိုယျတိုငျဝငျရောကျခံစားဘူးတဲ့သူတှမှေသိရှိနိုငျမယျလေ၊
ကနြျောလညျး စိတျကနြေပျမှုတှနေဲ့ကားကွီးပျေါကို အမြားသူငါ တှလေို ကနြေပျစှာ တကျပွီးရိုးမအိမျရာသို့ နလေ့ညျ (၁:၀၀)နာရီတှငျ အောငျမွငျစှာ ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ ခရကျဒဈ
တခါတလေမှာ အလွန်​နားလည်ရခက်တဲ့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ အူယားပြီးချစ်​ဖို့​ကောင်း​နေကြတဲ့ ရယ်စရာအပြုအမူ​လေးများ (၂၅)ပုံ
ဘဝကံဆိုးလွန်းလှတဲ့ မစိုးအိမွန် ဆုံးရှာပြီ